***** "I-Loft Rebhalde" ene-sauna ku-Bavarian. Ichibi laseConstance - I-Airbnb
***** "I-Loft Rebhalde" ene-sauna ku-Bavarian. Ichibi laseConstance
Nonnenhorn, Bayern, i-Germany
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Gudrun
U-Gudrun Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mas 26.
***** Ifulethi eliyi-LOFT elinamamitha-skwele angaphezu kuka-180 emazingeni amabili, elinabantu abayi-6 emakamelweni okulala amathathu anethezekile. Indawo yokuhlala neyokudlela enesiqhingi sasekhishini, itafula elinezihlalo ezifika kweziyisi-8, kanye nekhawunta ye-BAR enezihlalo ezi-4. I-LOFT inamagumbi okulala amathathu anamagumbi okugeza amathathu (enSuite). I-sauna ye-KLAFS ene-sanarium (ukwelashwa okukhanyayo), ishawa-IMVULA-MANDLA-MANDLA kanye ne-whirlpool endaweni yakho ye-SPA yenza isikhathi sakho ku-LOFT sibe yinto ongenakulibaleka.
Uzothola ikhadi lesivakashi le-Nonnenhorn lapho ufika. Ikunikeza ukugibela kwesitimela kwamahhala, phakathi kwezinye izinto. ukuya eLindau/Friedrichshafen, kanye nokungena mahhala e-Nonnenhorn lido enokufinyelela okuqondile echibini, kanye nechibi elishisayo elingaphandle eline-slide kanye nedamu lokugwedla lezingane.
Ilinganiselwe ngezinkanyezi ezi-5 yi-German Tourism Association!
ubusuku obungu-7 e- Nonnenhorn
Idolobhana lezithelo newayini i-Nonnenhorn ku-Bavarian Lake Constance lonaka izihambeli zayo ngemicimbi eminingi efana ne-KOMM UND SEE, ESSEN AND JAZZEN, CLASSIC FISH kanye ne-Traditional WINER FESTIVAL esiteji sokufika. I-LOCATION iphinde inikeze izindawo zokuvakasha ezinhle ezizungeze iLake Constance, ukuya e-Austria nase-Switzerland.
Ukunakekelwa kwesivakashi esisendaweni ngezinsizakalo zasekhaya nezamaholide. U-Michaela Litovic no-Gudrun Sternig bayakwamukela endaweni yabo yeholide futhi bazokujabulela ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ukunakekelwa kwesivakashi esisendaweni ngezinsizakalo zasekhaya nezamaholide. U-Michaela Litovic no-Gudrun Sternig bayakwamukela endaweni yabo yeholide futhi bazokujabulela ukuphen…
UGudrun Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Nonnenhorn namaphethelo